Cover Art | လမ်းအိုလေး
လှော်တက်ကိုနှစ် အသာအယာ လှော်တက်ပြားကို မျက်နှာပြင်ပေါ် ဝှေ့ဝိုက်သွား (သည်မော်နိုင်)
သည်မော်နိုင်ရဲ့ မပြီးနိုင် မစီးနိုင်များ။ ‘လှော်တက်ကိုနှစ် အသာအယာ လှော်တက်ပြားကို မျက်နှာပြင်ပေါ် ဝှေ့ဝိုက်သွား’ ။ တအုပ်လုံးမှာ ဒီတစ်ကြောင်းပဲပါတယ်။ တကယ်ကို မပြီးနိုင် မစီးနိုင်ကြီးပါပဲ။ မြန်မာစာအုပ်လောကမှာတော့ မှတ်တမ်းဝင်သွားပေါ့။ တန်ဖိုး- ၁၀၀၀၊ ကိုမိုးဝေးရဲ့ နှစ်ကာလများက ခြေထိုးပေးထားတယ်။
‘လှော်တက်ကိုနှစ် အသာအယာ လှော်တက်ပြားကို မျက်နှာပြင်ပေါ် ဝှေ့ဝိုက်သွား’ အဲဒီစာသားချည်းက ၃၃ မျက်နှာ၊ Immerse the oar gently circle its blade over the surface၊ ဇေယျာလင်းဘာသာပြန်ပေးတဲ့ အဲဒီစာသားချည်းက ၃၇ မျက်နှာ၊ မှတ်ကရော။
Src: တောကျောင်းဆရာ @Facebook
Categories: Cover Arts, Kabyarz, L=A=N=G=U=A=G=E | Tags: သည်မော်နိုင်, Cover Art, L=A=N=G=U=A=G=E, The Maw Naing | Permalink.
မြည်နေတဲ့ ထရမ်းပက် (နေမျိုး)
▀■ Related Links
• အိပ်ပျော်နေသော ကယ်တင်ရှင်များ
• တစ္ဆေဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြချက်
• သူအဝေးကို ပျံသန်းသွားတယ်
Categories: Cover Arts, Prose, Short Stories | Tags: နေမျိုး, ၀တ္ထုတို, Cover Art, nay myo, Prose, Short Stories | Permalink.
by lanolay	3 Comments
Koob One (Khin Mg Yin)
To one hundred thousand loves of hate live for one hundred years, before the reason of flowers bright. I have to realize the former ceremony was to findaway of desire. You might not like that. She finds the place scattered with flowers and paintings. The love of art for the sake of living makes oneafine man. He is also an animal,afrog or an alligator. They can live in water as well as on land. Land of shrines happens to be lion’s land. The year of heaven will be so far away from hell. The trees livealong life. They fade their tears and also dance to the tune of the breeze. Where will they go, to the east or to the north?
Mine has gone already. Have they friends in the north? Wonder. I cannot afford to go. My place is here. Though the space is limited I havealong years to life. The eagle swoops down occasionally on my pond where Lilies grow and dance and die. The crows remain the innocent black. They flew with their umbrella right into the darkness of dawn. Their voice isasing, better thanatune ofathousand pianos, though they eat the rubbish the maid throws in the morning.
Categories: Cover Arts, Prose, Short Stories | Tags: ခင်မောင်ရင်, ၀တ္ထုတို, Cover Art, Khin Mg Yin, lanolay, Short Stories | Permalink.
ရင်ထဲမှာဝေ (ဇော်ဇော်အောင်) – Cover Art
Source: Openmind Blog
Categories: Cover Arts, Prose | Tags: ဇော်ဇော်အောင်, Cover Art, zaw zaw aung | Permalink.
သူပဲအကြမ်း သူပဲအချော (မိုးဝေး) – Cover Art
Categories: Cover Arts, Kabyarz | Tags: မိုးဝေး, သူပဲအကြမ်း သူပဲအချော, Cover Art, Kabyarz, modernist poetry, moe way | Permalink.
Categories: Cover Arts, Essays, Kabyarz, PDFs | Tags: စိုင်းဝင်းမြင့်, တစ်ယောက်တည်းစကား, Cover Art, ebook, modernist poetry, Sai Win Myint | Permalink.
Categories: Kabyarz | Tags: Aung Cheimt, အောင်ချိမ့်, ပြဇာတ်မင်းသား, Cover Art, Kabyarz, modernist poetry | Permalink.
အရိုင်းတေး (ညိမ်းညို) – Cover Art
အရိုင်းတေး ထွက်ပါပြီ – Nyein Nyo blog
မြစ်အ (ညိမ်းညို) – Aung Paing Soe blog
Categories: Cover Arts | Tags: ညိမ်းညို, Cover Art, Nyein Nyo | Permalink.